Ubuntu 17.10 (Artful Aardvark) Yekupedzisira Kufriiza uye kuburitswa kwakarongerwa Gumiguru 19 | Linux Vakapindwa muropa
Ubuntu 17.10 ine codename Artful Aardvark inopinda muFinal Freeze, inotonhora uye inotarisirwa kuburitswa muna Gumiguru 19, ndiko kuti, mumazuva mashoma chete. Canonical inozivikanwa Debian-yakavakirwa GNU / Linux kugovera yatove nemazuva ekuburitsa. Sezvandareva, yapinda muFinal Freeze nhanho yekusimudzira kwayo, nhanho yavakapinda muna Gumiguru 12, 2017. Basa rakatanga mwedzi mitanhatu yapfuura, muna Kubvumbi 20, uye kubva ipapo vagadziri vanga vachishanda zvakanyanya kuvandudza nekuvandudza zvese zvine chekuita neiyi distro.
Unoziva chii ruzivo rwekutanga Kuchave kutsakatika kweiyo GNOME kunhuhwirira kweUbuntu neUbuntu neiyo Unity desktop, ndiko kuti, izvozvi mapurojekiti maviri anouya pamwechete uye akabatana. Naizvozvo, iyo yepamutemo Ubuntu inorasikirwa neUnited shell uye inongoteedzera iyo GNOME desktop nharaunda neayo default shell. Kunyangwe isu tichaona kana zvimwe zvinhu zvitsva zvatakaona muUbatanidzwa zvakasanganiswa kugadzirisa GNOME 3 uye zvinotipa kushamisika mune yakajeka chikamu mushure mematanho maviri eAlfa ebudiriro uye matanho eBeta, uyezve iyi Yekupedzisira Kufriza ...Adam Conrad ndomumwe weinjiniya e software pa Canonical iyo yakasimbisa iyi Yekupedzisira Kufreeze nhanho mune yeCanonical vagadziri 'tsamba yekutumira. Saka vhiki ino Ubuntu 17.10 ichasvika mune yayo yekupedzisira vhezheni kuti isu tese tigone kuiisa kana kugadzirisa yedu vhezheni kune ino nyowani nhanho. Saka kubva zvino zvichienda mberi nhau dzave chando uye izvo zviripo chete ndizvo zvicharondedzerwa kuve nekugadzikana uye kugadzirira kutanga musi waGumiguru 19, unocherechedzwa pamepu sezuva rekuburitswa kwekupedzisira.
Saka kune vese vane hanya, tichakurumidza kuva nazvo inowanikwa ISO mifananidzo yeUbuntu 17.10 uye, hongu, zvakare iyo yeavo ese evhenekeri epamutemo neakasiyana madesktop enharaunda anowanikwa kubva munharaunda. Iwe unotoziva sekukuudza kwatakaita muLxA, kuti Canonical's Ubuntu inongova nemifananidzo yeIO ye64-bit, nepo zvakasiyana siyana (Kubuntu, Lubuntu, Xubuntu, Ubuntu Studio, Ubuntu MATE, Ubuntu Kylin, uye Ubuntu Budgie) zvinoita kunge ivo vacharamba vachichengeta mifananidzo ye 32-bit kuisirwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Ubuntu 17.10 (Artful Aardvark) Yekupedzisira Kufriiza uye kuburitswa kwakarongerwa Gumiguru 19
Ndinoda kukubvunza mubvunzo. Iwe unoziva zvinoitika kana iwe uine ese maviri maBhaibheri (gnome uye ubuntu) akaiswa? Zvingave izvo kuti zvinokanganisa kukanganisa kana uchivandudza? Ehe, ini ndinonzwisisa kuti yakanakisa sarudzo ndeye kuichenesa kubva pakutanga, asi hazviwanzo kuitika. Ndinoonga mhinduro yako.
juan CORONADO cadagan akadaro
Ndakavandudza nekuchenesa kuisa kuUbuntu 17.10. Ini ndakaisa mapurogiramu angu andinofarira andinoshanda nawo (MyPaint, Gimp, Inkscape neKrita) uye kushamisika! ... izvi hazvishande zvakanaka. Vanotonhora. Ini ndinofanira kutangazve uye iro dambudziko. Ini ndakadzorera Ubintu 17.10 neIO nyowani uye zvakafanana. Chii chiri dambudziko ... pane chero munhu anoziva?
Pindura kuna juan CORONADO cadagan